February 26, 2021 - Padaethar
နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ….
February 26, 2021 by Padaethar
မိနျးကလေး တဈယောကျ ကောငျလေး နဲ့ အိပျခဲ့မယျဆိုရငျ နောကျတဈနမှေ့ာ သိစနေိုငျမယျ့ လက်ခဏာမြား သငျ့ ဘျောဒါ တဈယောကျ မနညေ့က ကောငျမလေး ခြောခြောလေးနဲ့ တူတူ အိပျခှငျ့ရခဲ့ရငျတော့ သိသာလှနျးနမှောပါ။ လလေေး တဈခြှနျခြှနျနဲ့ အကွောငျးမရှိ အကွောငျးရှာ ပွုံးနမှောပါ။ ပွီးတော့ အတှအေ့ကွုံကို မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ သငျ့ကိုလာပွောပွနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးမ တှေ ဆိုရငျရော?? သငျဘားမှာတှတေဲ့ မိနျးကလေး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျ ကောငျမလေး၊ Gym က ခြိတျတိတျတိတျဖွဈနတေဲ့ ကောငျမလေး၊ သူတို့ မနညေ့က ဆကျဆံခဲ့ရငျ သငျ ဘယျလို သိပါမလဲ?? ဆံပငျကောကျနတောလား?? Bite Mark တှလေား?? အဲဒီ ရုပျရှငျထဲက လက်ခဏာ တှဟော တကယျတော့ မှားနပေါသေးတယျ။ … Read more
ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၄) သွယ် ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို (သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ရပဲ)ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ကို ပြောပြ ပေး ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ (၁)ကလေးလိုဆက်ဆံပါ ယောက်ျားတွေဟာ တခါတလေမှာ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူတက်ပါ သလား? သေချာပါတယ် လုပ်ဖူးမှာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်လို အပြုအမူတွေ ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီမှာတွေ့ရင် မိန်းမတွေက မချင့်မရဲအမူအယာမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လက်ကမ်းဖေးမပြီး၊ အမေလို၊အမလိုပုံမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်ဆက်ဆံပေးရမှာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ပါစေဆိုပြီး လွှတ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပဲ သူလုပ်သမျှအရာတိုင်းမှာ အမြဲဝင်ပါပါ။၀င်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူကိုယ့်အပေါ်မှီခိုတဲ့အရာတွေ များလာ ပါစေ။နောက်ဆုံး ကိုယ်မရှိရင် ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ အဆင်မပြေနိုင် ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး … Read more
ရေစက်ဆုံခြင်း ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဒီလိုလေး စစ်ကြည့်မယ်
တစ်ယောက်ယောက်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်မိတဲ့အခါ ဖြစ်လာမယ့်လက္ခဏာရပ်များ…